रोचक Archives - Page 29 of 31 - Recent Nepal News
६० वर्षको उमेरमा पहिलोपल्ट आमा बन्दा जुम्ल्याह बच्चा
एजेन्सी । अमेरिकाको इन्डियाना राज्यमा ६० वष्र्डाको उमेरमा जुम्ल्याह बच्चाको आमा बन्दै एक महिलाले सबैलाई चकित पारेकी छिन् । निसन्तान दम्पतीले मेडिकल चेकअपपछि चिकित्सकको विशेषज्ञ टोलीको सल्लाह अनुसार नै आमा बन्ने निर्णय लिएका थिए । उक्त सल्लाह अनुसार क्लाइन्डेट कुक नाम गरेकी यी ६० वर्षीय महिलाले गत आइतबार जुम्ल्याह बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन्। दुबै बच्चाको तौल ५ पाउन्ड भएको बताइएको छ।
राष्ट्रिय झण्डाको कट्टु लगाउने नौ जना पक्राउ
काठमाडौं– मलेसियाको झण्डा अंकित कट्टु लगाएपछि ९ जना पक्राउ परेका छन् । मलेसियाको सिमाङमा गएको आइतबार फरमुला वान ग्राण्ड पिक्स प्रतियोगिताका क्रममा झण्डा अंकित कट्टु लगाउने अस्ट्रेलियाका ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सार्वजनिक ठाउँमा अभद्र व्यवहार देखाएको साथै राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गरेको भन्दै उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ । उनीहरुलाई चार दिन हिरासतमा राखिने स्...
६० वर्षे महिलाले जन्माइन् जुम्ल्याहा बच्चा
काठमाडौं, असोज १६ — अमेरिकाको इन्डियाना राज्यमा ६० वर्षकी एक महिलाले जुम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिएकी छन् । गत आइतबार जन्मेका दुवै बच्चाको वजन पाँच पाउण्ड रहेको पिपुल म्यागजिनले जनाएको छ । जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउने महिलाको नाम क्लाडेटे कुक हो । क्लाडेटे तथा उनका पतिले बच्चा जन्माउने उद्देश्ले एक वर्षअघि फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट सुरु गरेका थिए ।क्लाडेटेलाई नौ वर्षअगाडि एक अस्पतालले उमेरका कारणले ब...
१० वर्षमा बलात्कृतको मर्मस्पर्शी प्रश्न,मान्छेलाई किन रंगको आधारमा माया दिइन्छ ?
काठमाडौं । सबैको जीवनमा एउटा यस्तो समय आउँछ जब तपाई आफू जिन्दगीसँग हार्नुहुन्छ । तपाईलाई जीवनबाट बिदा लिगौं जस्तो लाग्नथाल्छ । तपाईंलाई यी युवतीको कथा पढेपछि आफ्नो जीवनको दुःख र पीडा नै भुलेजस्तो हुनेछ र जीवनमा केही नयाँ र राम्रो काम गर्नेबारे सोच्न थाल्नुहुनेछ । यी युवतीको जीवनकथा फेसबुकमा शेयर भएपछि निकै चर्चामा आयो । हाम्रो समाजमा पनि वर्ण हेरेर व्यवहार गर्ने प्रचलन छ जस्तो कि केही समयअघि एमाल...
एउटा बिरालो : जोे ९ वर्षदेखि लगातार पसलमा काम गरिरहेछ
एजेन्सी, असोज ११—न्युयोर्कको एउटा पसलमा ९ वर्षदेखि एउटा बिरालो काम गरिरहेको छ। रमाइलो कुरा, त्यो बिरालोले अहिलेसम्म छुट्टीसमेत लिएको छैन्। बिरालोको नाम बोबो हो। ९ वर्षअघि एक कर्मचारीले न्युयोर्कको चाइनाटाउन एरियाको यो पसलमा बिरालोलाई पहिलो पल्ट ल्याएको थियो। बोबोलाई पसलमा यहाँका कर्मचारी तथा एउटी महिला वकिल एनी मिलेर हेरविचार गर्छन्। आनी दैनिकी पसलमा आउँछिन र बेलाबखत बोबोलाई भेटेनरी लान्छिन् र ...
सँगैको सिटमा मोटो मान्छे राखेको भन्दै एअरलाइन्सविरुद्ध मुद्दा दायर
एजेन्सी । आफ्नो नजिकैको सिटमा एक मोटो मान्छेलाई राखेको भन्दै इमिरेट्स एअरलाइन्स्विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । एक इटालियन वकिलले इमिरेट्स एअरलाइन्स्विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनदेखि दुवई जाने क्रममा आफ्नो नजिकैको सिटमा एक मोटो मान्छेलाई राखेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका समाचार संस्था ‘द इन्डिपेन्डेन्ट’ले जनाएको छ । इटालीस्थित पदुआको एक अदालतमा उनले क्षतिपुर्तिस्वरुप जम्मा ...
बच्चा जन्माउन महिला नचाहिने
एजेन्सी, असोज ५ – के महिलाको डिम्बबिना बच्चा जन्मन सम्भव होला ? वैज्ञानिकहरुले त भविष्यमा महिलाको अण्डाबिना नै बच्चा जन्माउन सक्ने सम्भावना दर्शाएका छन् ।यससम्बन्धी प्रयोग गरिरहेको वैज्ञानिक समूहले मुसामा यसको सफल प्रयोग गरेका छन् । केवल शुक्राणुको मद्दतबाट बच्चा जन्माउन सफल भएपछि उनीहरु भविष्यमा बच्चा जन्माउने प्रक्रियाबाट महिलालाई टाढै राख्न सकिने निचोडमा पुगेका छन् ।बाथ युनिभर्सिटीका वैज्ञान...
नरेन्द्र मोदी बिक्रीमा,मूल्य ९ सय ५८ भारु
एजेन्सी - भारतीय एक कम्पनीले धमाधम नरेन्द्र मोदीको उत्पादन गरि बिक्रीमा राखेको छ । नरम खेलौना बनाउने कम्पनी टिकल्सले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वरुपकै खेलौना तयार पारेर बिक्रीमा राखेको हो । मोदी स्वरुप खेलौनाको मूल्य साइज अनुसार फरक -फरक राखिएको छ । यसलाई अनलाइन मार्फत बिक्रि गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यसको मूल्य ९ सय ५८ भारुदेखी १३६५ भारु सम्म तोकिएको छ । केही महिना अघि पाकिस्तानी प्र...
बिएमडब्लु कारभन्दा महँगो घोडा
एउटा घोडाको मूल्य कति होला ? भारतमा एउटा घोडा पौने २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढिमा बिक्री भएको छ । राजस्थानको पाली जिल्लामा मारवाडी नश्लको प्रभात नामको उक्त घोडा नारायणसिंह आकडावासले १ करोड ११ लाख भारुमा किनेका हुन् । ११ वर्षको उक्त घोडा भंवर सिंह राठौरले पाल्दै आएका थिए । घरजग्गा तथा खानी व्यवसाय गर्ने धनाढ्य नारायण सिंहले यसअघि मारवाडी नश्लकै दुइवटा पोथी घोडा पालेका थिए । जब उनले प्रभात घोड...
शनिबार, भाद्र १८, २०७३
भाद्र १८- अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले बडो अचम्मको कुरो पत्ता लगाएको दाबी गरेका छन् । त्यो के भने, अल्छी व्यक्ति सक्रिय रहनेहरूको दाँजोमा बढी बुद्घिमान् हुन सक्छन् रे । सर्तचाहिँ के छ भने, त्यस्ता अल्छी व्यक्तिहरू बढी समय चिन्तन गर्नेचाहिँ हुनुपर्छ । जर्नल अफ हेल्थ साइकोलजीमा प्रकाशित उपर्युक्त अध्ययन अनुसार सक्रिय व्यक्तिलाई आफ्नो मस्तिष्क सदैव ‘फ्रेस’ राख्नका लागि बढी सक्रियताको आवश्यकता प...